मानसिक | स्वास्थ्य खबरपत्रिका
होमपेज » डक्टर्स आर्टिकल » "मानसिक" खतरनाक हुन्छ ड्रग्सको लत डा. कपिलदेव उपाध्याय गायक सुगम पोखरेल लागूपदार्थ सेवनको आरोपमा पक्राउ परेको खबर सुनेपछि यसबारे केही लेख्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको थियो । यो घटनाको लगत्तै पूर्वयुवराज पारस शाह विरामी परेको खबर आयो । उनका बारेमा पनि लागूऔषध सेवन गरेका समाचार समयसमयमा प्रकाशमा आएका छन् । बास्तवमा लागूऔषध के हो र यसले सेवनाकर्तामा कस्तो प्रभाव पार्छ [...]
विचारले निम्त्याउने रोग - डा. कपिलदेव उपाध्याय, वरिष्ठ मनोचिकित्स / मनोवैज्ञानिकहरु भन्छन्, मन मस्तिष्कमा हुन्छ । मस्तिष्कले विचार गर्छ र भाव उत्पन्न हुन्छ । साथै भावना पोख्छ, कल्पना गर्छ, नयाँ कुराको श्रृजना गर्छ, इच्छा गर्छ, ठिक बेठिक छुट्याउने प्रयास गर्छ, पढेको, सुनेको वा देखेको सम्झिन्छ, अनुभव गर्छ र यस्तैयस्तै अरु धेरै कामहरु गर्छ । मन अत्यन्त [...]
निद्रामा बरबराउने, दाह्रा किट्ने र हिड्ने समस्या डा. सरोज ओझा , मनोचिकित्सक, त्रि.वि.शिक्षण अस्पताल / निद्रा भनेको के हो ? निद्रा भनेको हाम्रो जीवनको आधारभुत आवश्यकता हो । आधारभुत आवश्यकतामा खाना, पानी, निद्रा, सेक्स आदि पर्छन् । २४ घण्टामा कमसेकम ७ देखि ९ घण्टासुत्न सक्यो भने शरीरलाई फाइदा हुन्छ । जसका कारण ब्रेनलगायत शरीरका महत्वपूर्ण अंगलाई आराम दिन्छ । [...]
निद्रामा देखिने रोचक समस्या - डा.सिपी सेढार्इं , नशा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ, चितवन मेडिकल कलेज / तनाव, व्यस्त जीवनशैली र प्रतिस्पर्धाका कारण मानिसमा निन्द्रा कम लाग्ने समस्या बढ्दै गएको पाइन्छ । उत्पादनशील उमेरमा मात्र होइन, वृद्धावस्थामा यो समस्याले निकै सताउँछ । ओछ्यानमा गएपछि निदाउन धेरै समय लाग्ने, बारम्बार व्यूँझने, विहान चाँडै व्यूँझने आदि निद्राका समस्या हुन् । [...]
बक्सिङ हान्ने रोग ‘राती भयो कि कोही आएर मेरो अनुहारमा मुक्कैमुक्काले हान्छ,’ दुई महिना अघि मकहाँ जचाउँन आएका २७ वर्षिय एक युवाले अनौठो समस्या सुनाए । उनको अनुहार भरी नै निल डाम र घाउ थियो । उनी भन्दै थिए, ‘अब म त्यो घरमा कहिले पनि जाँन्न, उसले मार्छ मलाई । मलाई यही अस्पतालमै भर्ना गरिदिनुस, बरू म महिनौ [...]
आध्यात्मिकता र मानसिक स्वास्थ्य डा. कपिलदेव उपाध्याय, वरिष्ठ मनोचिकित्सक नेपाली समाजमा कुनै पनि रोग लाग्दा आफ्नो कर्म, भाग्य, ग्रहदशा आदि विग्रेर हो भन्ने कुरामा धेरैले विश्वास गर्छन् । भूत, प्रेत, लागो, मृतआत्माको राम्रो सतगत नगरेको, आफ्नो भाकल पूरा गर्न नसकेको जस्ता विश्वास पनि रोग लाग्दा परिवारले गर्ने गरेको पाइन्छ । मानसिक रोगका [...]
नीतिले बिर्सिएको ‘बिर्सने रोग’ डा. अरुण झा डिमेन्सिया रोग विशेषज्ञ, बेलायत नेपालको पहिलो महिला उप प्रधानमन्त्री तथा बरिष्ठ कांग्रेस नेतृ शैलजा आचार्यको तीन बर्षअघि अल्जाइमर रोगले निधन भएको थियो । अमेरिकाका भूतपूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन तथा भारतीय नेता जर्ज फर्नान्डिसलाई पनि यही रोग लागेको थियो । सामान्यतयाः बुढेसकालमा लाग्ने डिमेन्सिया समूहको अल्जाइमर रोग पाँच प्रतिशतमा देखिन्छ । यो ज्येष्ठ [...]
Recent Posts	जीवन अमूल्य छ, लापरबाही नगरौं …………….. किनकि ?